प्रसंग सातौँ NRNA चुनावको - Fonij Korea
प्रसंग सातौँ NRNA चुनावको
लेखक: फोनिज कोरिया संवादाता	| प्रकाशीत मिति: September 25, 2019
बाहिर झम झम पानी परिरहेको थियो, कोरियनहरु प्राय घरबाट बाहिर निस्केका थिएनन्। अघिल्लो हप्ता जस्तो सार्बजानिक यातायातहरु खचाखच थिएनन्, प्राय खालि नै थिए तर मलाई राति तिन बजे नै निन्द्रा ले छोड्यो अनि तयारी गर्न थालें सौलको यात्राको लागि ।
नुहाई धुवाइ गरिसकेर कपडा मात्र लगाउँदै थिएं एक जना मित्रको फोन आयो ” कति खेर आईपुग्नु हुन्छ? ” मैले नि सटिक उत्तर दिँदै भने “छिटै आईपुग्छु” भन्दै केहि बेर गफियौं, अनि मैले फोन राखें । तर साथिको एउटा शब्दले मेरो मानसपटल मा तहल्का नै ल्याईदियो, अनि सोंच्न थालें, ! उसले भनेका थिए ” आजको अधिबेशनमा त मण्डलेहरु को हालिमुहालि छ रे नि? ” खास यो मण्डले भन्ने शब्द ले त्यति राम्रो सन्देश नदिए पनि यस्ले पार्ने प्रभाबको बारेमा सोंच्न थालें! हुन त आज हुंदै गरेको एन आर एन ए को अधिबेसन कुनै राजनैतिक दल वा कुनै आम निर्बाचन थिएन , यो त नेपालीहरु जो अन्य देश मा गएर बसोबास गर्दै जाँदा त्यहीँ को स्थाई बसोबास गर्न अनुमति पाएकाहरुको संस्थाको हो। तर यहाँ पनि राजनैतिक दलका भातृ संगठनहरु यति साह्रो हावि छन कि , माहोल हेर्दा यस्तो लाग्छ यो कुनै परोपकारी संस्थाको अधिबेशन नभै यो नेपालको संघिय चुनाव हो। काँग्रेस र ने क पा मध्य कोस्ले जित्ने? कुन जाति ले जित्ने त्यो उमेदवार कुन क्षेत्र को हो? तेस्ले कुन धर्म मा आस्था राख्छ? सामाजिक सन्जाल हेर्दा लाग्थ्यो सबै बिद्वानहरुले टिका टिप्पणी गरिरहेका छन । मानौं अब देश प्रजातान्त्रिक वा साम्यवादी हुँदैछ! कसैको टिप्पणी यस्तो छ कि उनले समर्थन गरेको उमेदवार ले जिते तिनले यो संस्था लाई अर्कै ग्रह तिर पुर्याउने छ! तर सार कुरा भने सबै को नजर भन्दा टाढा छ! यदि साँच्चिनै यो संस्था जस्को आज नयाँ नेतृत्व चयन हुन लागिरहेको छ, यस्ले न त नेपाल मा नै कुनै ठोस काम गरेको छ, न त जहाँ जहाँ यस को शाखा हरु छन त्यहाँ नै केहि गरेको छ। भन्नलाई भन्ने गरिन्छ यो संस्था धनि हरुको संस्था हो भनेर, तर यहाँ भोट हाल्नै को लागि मैले पनि नेपाली दुई हजार रुपैयाँ मा साधारण सदस्यता किनेको छु! यसको आज भोट हाल्नु बाहेक अरु कुनै काम छैन ।
अझ त्यो शब्द ” मण्डले” मा मेरो ध्यान केन्द्रित गर्दैगर्दा नेपालका तीन निर्वाचनहरुको झल्को नमिठो गरि दिलायो । अनि फेरि आफैं लाई सन्त्वना दिंदै सोचें “दुई तिहाइ वाला ले त केहि गर्न सकेन जाबो यो घर को चुहिने छानो टाल्न पर्देशिएका प्रबासीहरु संग के को त्यत्रो अपेक्षा गर्ने हो? “भन्ने सोंच्दा सोंच्दै गाडि आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसकिएछ अनि म लागें दुई हजारमा किनेको सदस्यताले लगाउने निर्वाचन स्थल तिर ।
अन्त्यमा मैले निर्बाचित गर्ने नेतृत्व ले बिगतको भन्दा सफल , सबल , न्यायमुखि , NRNA तथा म प्रवासि मजदुर भएकोले मजदुरमैत्री कार्यहरु गरोस भन्ने शुभकामना सहित एक भोट दिएको छु यसको सहि सदुपयोग होस् ।
सेवा , “””सेमुना धन्यवाद।
लेखक उदयपुर सेवा समाज, दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष हुन्।